Semalt: Kutheni i-WordPress Plugins ilahleka kwi-plugin Directory?
Malunga neeplagizi ze-WordPress ezingamawaka amahlanu zifumaneka kwi-WordPress plugin directory, kodwa kanye ngexeshana ezinye zazo ziyabonakala, kwaye asiyiqondi isizathu sokuba kwenzeke. Kukho izizathu ezifanelekileyo zokuba kutheni oku kwenzeka, kodwa ulwazi alufumaneki ngokubanzi.
U-Ross Barber, oyingcali ehamba phambili Semalt , uxelela ukuba ukuba i-plugin yakho inqabile ngokukhawuleza kwaye ufuna ukwazi isizathu ngaphambi kokuba uqale uphando, kufuneka uhlole ideshibhodi yakho ye-WordPress malunga namathuba alandelayo
1. Isayithi lakho liyakwehliswa
Ngamanye amaxesha i-WordPress okanye iiwebhsayithi zeblogi zonakaliswe ngaphandle kolwazi lwakho - royal replicas. Amathuba kukuba idatha yakho eyebiwe kwaye iiplagizi azisebenzi kakuhle kwi-WordPress yakho. Makheke apha ndikuxelele ukuba i-WordPress inoxanduva lokwenza uhlolo olusisiseko kuzo zonke iifowuni ezifakwe kwaye zingasusa iikhowudi ezifakwe kwi-metadata yakho, kodwa ukuba ingxaki iyaqhubeka, kufuneka udibanise ngokukhawuleza kwi-WordPress okanye ingcali ye-IT.
2. Hlola ikhowudi ye-Editor malunga nobuqhopho obukhoyo
Esinye isizathu sokuba i-plugin yakho ye-WordPress ingabonakali kukuba wena okanye omnye umntu utshintshe ikhowudi yomhleli. Ngamanye amaxesha abacuki nabagaxekile basebenzisa amafayile okwenziwa kunye nekhowudi yomhleli kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress kwaye ufaka iikhowudi zabo ezinobungozi. Amathuba kukuba nayiphi na le khowudi ibangela ukuba i-plugin yakho ipheleke kwisikhokelo se-plugin, kodwa akukho nto inokukhathazeka ngayo. Kuphela kufuneka uhambe kwicandelo loMhleli kwaye khangela ukuba yonke into iyinto evamile..Ukuba ubona iikhowudi ezinokukrokra apha, kufuneka uzikhuphe ngokukhawuleza.
3. Iingxaki ngefayile yeFP
Njengecandelo loMhleli, ifayile yakho yeFP iyakulungiswa ngenye inkohlakalo okanye omnye umlawuli. Kufuneka uhlolisise izicwangciso zefayili uze ulungiswe, ukuba unyanzelekile. Ngokuqhelekileyo, iifayile ezinjalo zihlelwe ngabagculi ngenxa yezizathu ezinobungozi.
4. Qaphela izixhobo zokungeniswa kwekhowudi
Awufanele usebenzise i-othomathikhi ye-injection tool in website yakho ye-WordPress. Oku kungenxa yokuba ezo khowudi zingenza ezinye okanye zonke iiplagi zinyamalale kwi-directory kwaye ungakhohlwa ukufikelela kwakho kwiwebhusayithi. Abanye abahlaseli bachitha ixesha elilodwa ukusabalalisa i-Distributed Denial of Service ukuhlaselwa kwaye bajobe iinkcukacha ezinobungozi kwiziko lakho ngokusebenzisa ezo zixhobo, ngoko ke sincoma kakhulu ukuba ungabikho kwezo zixhobo zekhowudi uze uqinisekise ukhuseleko lwesiza sakho.
5. I-Wordpress ingasusa iplagi ngokwazo
Ngamanye amaxesha, i-WordPress iyakususa okanye ikhuphe i-plugin ngokwayo kwaye isizathu sayo asiyazi. Nangona kunjalo, unokujonga isetyenziso sakho sokhuseleko kwaye uqhagamshelane nabantu abadala ukuba bayeke iWindowsPress ekususeni iiplagi eziliqela kwixesha elizayo. Ukuba i-WordPress yakho yayililumkisile ngezihlandlo ngezinto ezimbalwa kwaye awuzange uqaphele, amathuba kukuba i-plugin yakho iya kususwa kwi-directory ngokuzenzekelayo.
6. Hlaziya i-plugin yakho ukukhusela ukuba isuswe
Ngamanye amaxesha iiplagizi ezidlulileyo zihlaziywa ngokuzenzekelayo okanye zisuswe kwi-plugin ye-plugin ye-WordPress. Ukuthintela lo mbandela, kufuneka uhlaziye rhoqo izicwangciso zakho zeeplagi kwaye ugcine imigangatho yazo ephakamileyo kunokwenzeka.